Global Voices teny Malagasy » Graffiti ao Téhéran · Global Voices teny Malagasy » Print
Graffiti ao Téhéran
Voadika ny 10 Desambra 2012 15:53 GMT 1	 · Mpanoratra Melinda Legendre Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Tsy mba malaza amin'ny fahalalahana maneho hevitra i Iran na amin'ny fihetsiketseham-bahoaka eny an-kalamanjàna. Saingy manjaka ao kosa ny zavakanto an-tanàn-dehibe ; raha mandravaka ireo rindrin'ny tanàn-dehibe sasany ny sary natao mivantana tamin'ny rindrina, kanto avy amin'ny fanambatambarana poti-bato (mozaika) ary ny hosodoko hafa ‘nekena’ (nahazo alalana) na dia tsy miharohary toy ny any Eoropa aza : Miditra tsimoramora na sahisahy kokoa any an-tanandehibe ny graffitis, tags ry kisarisary tsotra  [mg] isan-karazany.
Graffiti ao Tehran. Saripika : Melinda Legendre
Misy ny rindrindra sasany didotry ny lokom-praopagandy, maritiora iray ohatra. Fa mety ho sary manajavozavo fotsiny io na sarim-pandravahana. Fa tena tsangan'asa kosa ny sasany.
Graffiti ao Tehran, novambra 2012. Saripika : Issa
Herinandro vitsivitsy izay, nisy mpaka sary avy any Tehran nandefa taty amin'ny mpanoratra tamin'ny alalan'ny mailaka ireto sary roa amin'ny graffiti iray ireto miaraka amin'ny heviteniny :
Nalaiko takaikin'ny fiandrasana bus iray tao Tehran ireto sary ireto.
Mino aho fa misy olona miady amin'ny fiadidiana ny tanànan'i Tehran. Andro iray izy no mandoko ny graffiti, mamafa azy ny monisipalite ny andro manaraka. Miverimberina hatrany izany.
Telo herinandro taty aoriana, raha mbola teo am-pangatahana ny hanonona ny anarany sy hamoaka ny sariny aho, dia novaliany fa heni-boninahitra izy amin'izany ary tiany ny nanampy izao :
Ankehitriny, nanosotra loko na zavatra mivohitra teo amin'ny rindrina ry zareo hanakanana ila olona hanampy graffiti hafa. Saingy talohan'izany dia tena naloto tokoa io rindrina io. Lasa naman'ny olona noho izany ilay fahavalon'ny monisipalite satria tsy maloto intsony ankehitriny ny rindrina.
Noho izany dia sahisahy kokoa noho ny ao Eoropa ny maneho hevitra toy [ny nataon-dranamana ity]. Tsy misy lalàna momba azy ity ao Iran amin'izao fotoana, saingy raha heverin'ny mpitondra ho asam-panakorontanana ny sangan'asa dia lasa mivadika tsotra izao ho heloka bevava.
Vao manomboka mihamisongadina ny zavakanto an-dalambe ao Iran izao. Mirary soa azy hiroborobo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/10/42865/
 manjaka ao kosa ny zavakanto an-tanàn-dehibe: https://globalvoicesonline.org/2008/11/11/iran-graffiti-from-tehran/
 sahisahy kokoa any an-tanandehibe ny graffitis, tags ry kisarisary tsotra: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/04/18/32332/